बाहिरीयो पुरुष भन्दा महिलाहरु धेरैं बाँच्नुको यस्तो रहस्य ! - Darpanpost
» रोचक » समाचार अंक: 13996
बाहिरीयो पुरुष भन्दा महिलाहरु धेरैं बाँच्नुको यस्तो रहस्य !
काठमाडौं । संसारभर, पुरुषहरुको तुलनामा महिलाहरुको औसत आयु धेरैं हुने गर्दछ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार सन् २०१६ मा जन्मिने मानिसहरू ७२ वर्षको औसत आयु लिएर जन्मिएका थिए । यो तथ्याङ्क लिङ्गका आधारमा औसत आयु छुट्टाउँदा भने महिलाको ७४ वर्ष दुई महिना र पुरुषको ६९ वर्ष आठ महिना भएको थियो ।
पुरुषभन्दा महिला एक सय वर्षभन्दा बढी बाँचने सम्भावना हुन्छ । सन् २०१० को अमेरिकी जनगणनामा अमेरिकाका एक सय वर्षभन्दा माथि उमेरका ५३,३६४ जना थिए । उनीहरूमध्ये ९,१६२ जना पुरुष र ४४,२०२ जना महिला रहेका थिए । यत्ति भएपछि सबैंलाई जान्ने चाहान हुनसक्छ आखिर पुरुषहरुको तुलनामा महिला कसरी बढी बाँच्छन् त ? उनीहरूलाई के कारणले पुरूषभन्दा लामो समयसम्म बाँचन सहयोग गर्दछ । यसमा मुख्य रुपमा तीनवटा कारणहरु अगाडी आएका छन् ।
युनिभर्सिटी कलेज लण्डनका प्राध्यापक डेभिठ जेम्स भन्छन्, “पुरुष भ्रूणहरू महिला भ्रूणभन्दा बढी खेर जान्छन्।” यसको एउटा कारण चाहिँ लिङ्ग निर्धारण गर्ने क्रोमोजोमका कारण हुनसक्छ । महिलाहरूमा दुई एक्स तथा पुरुषहरूमा एक्स र वाई क्रोमोजोम हुन्छन् । क्रोमोजोमा जीन हुन्छ । एक्स क्रोमोजोममा आयु लामो बनाउने धेरै नै क्रोमोजोम हुन्छ ।
बीबीसी रेडियोसँग कुरा गर्दै जेम्सले भने, “यदि तपाईँको एक्स क्रोमोजोमको कुनै समस्या छ र तपाईँ महिला हो भने तपाईँसँग अर्को एउटा एक्स क्रोमोजोम रहन्छ। तर तपाईँ पुरुष हो भने तपाईँसँग अर्को एक्स क्रोमोजोम हुन्न।” एक्टर विश्वविद्यालयकी लोर्ना ह्यारिसले भनिन्, “पुरुषहरू गर्भावस्थामै मर्ने सम्भावना २० देखि ३० प्रतिशत बढी हुन्छ,” । भाले चराहरूमा भने दुई एक्स क्रोमोजोम हुन्छ र उनीहरू पोथी चराभन्दा बढी बाँच्छन् ।
तीमध्ये किशोरावस्थामा पुग्नु अगाडि अण्डकोष निकालिएका ८१ जना नपुंसकहरू थिए र उनीहरूको औसत उमेर ७० वर्ष पाइएको थियो। त्यही समयका अरू पुरुषहरूको उमेर भने ५० थियो । धेरै अध्ययनहरूले मानिस वा जनावरहरूको आयु अण्डकोष नभएमा लामो हुने देखाएका छन् । महिलाहरूको हार्मोन एस्ट्रोजिनमा भने शरीरमा हुने हानीकारक तत्वहरूलाई हटाउने गुण हुन्छ । महिलाहरूको हर्मोन एस्ट्रोजिन हानीकारक कोलोस्ट्रोलविरुद्ध लडेर मुटु रोगबाट बच्न मद्दत गर्छ ।